အခှနျအပွောငျးအလဲမှာ ကားဈေးတှေ ဘယျလောကျထိ ကနြိုငျမလဲ သိခငျြသူတှေ အတှကျ – Daily Feed MM
အခှနျအပွောငျးအလဲမှာ ကားဈေးတှေ ဘယျလောကျထိ ကနြိုငျမလဲ သိခငျြသူတှေ အတှကျ
Admin_John | August 7, 2020 | Local News | No Comments
ကားတဈစီး သှငျးရငျ အခှနျ ၅ မြိုးဆောငျရ ပါ တယျ..။
၁။ အကောကျခှနျ Custom Duty
၂။ အထူးကုနျစညျခှနျ (SGT)
၃။ ကုနျသှယျခှနျ (CT)
၄။ ဝငျငှခှေနျ(*Unruled Income tax)
၅။ ကညနခှနျ ဆိုပွီး ရှိ ပါတယျ.
အခှနျ အပွောငျးအလဲတှကွေား မှာ ကားဈေး ဘယျလောကျထိ ကသြှားမလဲအခု Custom Duty လြှော့ပေး တာ အတညျဖွဈ ပါပွီ၊ (ရုံးတှငျးညှနျကွားစာလညျး ထှကျပါပွီ) ( CD လြှော့လိုကျတာ နဲ့ အခှနျတှကျခကျြမှုအရ အခှနျ ၁၊ ၂၊ ၃ မှာပါ လိုကျလြော့ ပါတယျ )စညျးကပျြမှု မှလှတျကငျးသော ဝငျငှခှေနျကိုတော့ ၃% ကနေ ၆% တကျဖို့ မြားနပေါပွီ။ အစိုးရက ၃၀% တငျပွတာကို လှတျတျောဥပဒကွေမျးကျောမတီက ၆% နဲ့ပွနျပွငျထားပါတယျ။ မဲခှဲပွီးရငျ အတညျဖွဈပါမယျ…ဟိုတုနျးကတော့ Unruled Income tax တှကေို ကောကျတာ ၁၅% ပါ။ ဘာကွောငျ့ ၁၅% ကောကျလဲဆိုတော့ စညျးကွပျခံထားရသူတှကေ ၁၀% အနညျးဆုံးဆောငျထားရ လို့ပါ…။
ကညနခှနျ ကလညျး တဈဝကျလောကျလြှော့မယျ လို့ အသံထှကျနေ ပါတယျ( အတညျမဖွဈမသေးပါ )တျောတျောမြားမြားက ကားဝယျရငျ ဆောငျရတဲ့ ဝငျငှခှေနျကို မဖွဈမနပေေးရမယျ့ငှလေို့ပဲ ထငျနတေယျ.. အမှနျက စညျးကွပျခံပွီးတဲ့ငှဖွေူရှိသူက အဲ့ဒီငှဖွေူနဲ့ ဝယျရငျ မပေးရပါဘူး.. စညျးကွပျမခံရသေးသူသာပေးရတာပါ…ဝငျငှတှေကေနေ (ကား၊ အိမျခွံမွေ) ဝယျတဲ့အခါRuled Income tax – စညျးကပျြပွီးသောဝငျငှေ (ငှဖွေူ) သူတို့ကတော့ ဝ-၂၅%အထိ အခှနျ ဆောငျထားရပါတယျ. အဲဒါကွောငျ့ အဲဒီငှတှေေ ပွနိုငျရငျ အခှနျ ထပျမပေးရပါဘူး။
Unruled Income tax – စညျးကပျြမခံရသေးသောငှေ (ငှနေို့နှဈ) အခှနျမဆောငျရသေး (ခုတော့ ၆%ကနေ စဆောငျရနိုငျပါတယျ)Black Money – စညျးကပျြမခံဝံ့သောငှေ (ငှမေဲ) သမာအာဇီဝမဟုတျသောအလုပျမြားမှရသောငှနေံပါတျ ၄ ဝငျငှခှေနျနှုနျး ထား အပွောငျးအလဲ ဟာ ငှဖွေူ သမားတှေ ကို မသကျရောကျ ပါဘူးငှဖွေူသမား က ၁၀% ကနေ ၂၅% ဆောငျမှ ရတဲ့ ငှဖွေူ ကို ငှနေို့နှဈသမား နဲ့ ငှမေဲသမားတှကေ ၆%ကနေ စပွီးပဲ ဆောငျရမယျဆိုတော့ တရားသလား၊ မတရားသလား စဉျးစားကွညျ့ကွေ ပါ့.. ( ခုတော့ ကိုဗဈကာလ ငှကွေေးစီးဆငျးမှုကလညျးလိုနတေော့ ကာလအပိုငျးအခွားတဈခုအနနေဲ့လုပျရမှာပါပဲ ။
အခှနျ အပွောငျးအလဲတှကွေား မှာ ကားဈေး ဘယျလောကျထိ ကသြှားမလဲဖွဈသှားနိုငျတဲ့ ကားဈေးက
၁။ အခု ၈ လပိုငျး ၁ ရကျနကေ့ စပွီး ရနျကုနျဆိပျကမျး ကို ရောကျလာတဲ့ ကားတှေ ကို အကောကျခှနျနှုနျးထားတှေ လြှော့လိုကျပါတယျ..ဘယျလိုလြှော့တာလဲဆိုတော့ CBU ကားတှကေို အငျဂငျြပါဝါ 2.0 အောကျကို အရငျ ၃၀% ကနေ ၂၀% လြှော့ကောကျလိုကျတယျ၊ 2.0 အထကျဆိုရငျ အရငျ ၄၀% ကောကျတာကနေ ၃၀% ဖွဈသှားတယျ။SKD အရငျ ၁၀% ကနေ ဝ% လြှော့ကောကျလိုကျတယျ၊ 2.0 အထကျဆိုရငျ အရငျ ၂၀% ကောကျတာကနေ ၅% ဖွဈသှားတယျ။လာမယျ့ အောကျတိုဘာ ၁ ရကျ နမှေ့ာတော့ စညျးကပျြမှုမှလှတျကငျးသောငှကေို ၃% တဈနှဈလြှော့ပေးထားတာကနေ နောကျတဈနှဈကို ၆% ပွောငျးဖို့ရှိနပေါတယျ..အခုဆိပျကမျးက မထုတျရသေးတဲ့ ကားတှအေတှကျ အဆငျပွသှေားပွီး၊ ဆိပျကမျးထုတျပွီးသား ကားတှကေတော့ မပါဘူးပေါ့..။
ကားတဈစီးသှငျးရငျ ဆောငျရတဲ့ အခှနျ ၅ မြိုး
အကွမျးဖဉျြး ဘယျလောကျ လြှော့သှားမလဲဆိုတော့ အငျဂငျြပါဝါ ၂၀၀၀ အောကျ (CIFဈေး (သို့) AV) ဒျေါလာ ၂၀၀၀၀ တနျကားကို တှကျကွညျ့ရငျအရငျ ၂၀၀၀၀ x ၃၀% = ဒျေါလာ ၆၀၀၀ ကနေ အခု ၂၀၀၀၀ x ၂၀%= ဒျေါလာ၄၀၀၀ ဖွဈသှားတော့ ဒျေါလာ ၂၀၀၀ (၂၈ သိနျး သကျသာသှားမယျ)နောကျအထူးကုနျစညျခှနျ နညျးနညျးလြော့ပါမယျ … တှကျနညျးအရ (၂၀၀၀၀ + ၄၀၀၀)x၁၀% = ၂၄၀၀ $ ဖွဈသှားပါမယျ၊ နဂိုနှုနျးဆိုရငျ ၂၆၀၀ ဆိုတော့ ဒျေါလာ ၂၀၀ သကျသာပါမယျ..။
Commercial Tax နညျးနညျးလြော့ပါမယျ တှကျနညျးအရ (AV + CD + SGD ) x 5% ဆိုတော့ နဂိုထကျ $110 သကျသာသှားပါမယျ..ဆိုတော့ အခှနျ ၃မြိုးအတှကျ သိနျး ၃၀၀ ဝနျးကငျြကားတှမှော 32သိနျး ဝနျးကငျြလြော့သှားပါပွီ..ဒါပမေယျ့ (Unruled Income Tax သာ ၃% ကနေ ၆% တကျသှားရငျ) ၂၃ သိနျး ဆောငျရမှာဖွဈလို့ နဂိုထကျ ၁၀ သိနျး ပိုဆောငျရပါမယျ.. (ငှဖွေူရှိပွီးသားလူကတော့ မပေးရဘူးပေါ့…)။
အခှနျ အပွောငျးအလဲတှကွေား မှာ ကားဈေး ဘယျလောကျထိ ကသြှားမလဲအမှနျက ၃% နဲ့ ပေးတုနျးမှာ ဆောငျထားတဲ့သူတှကေ အဲဒီ ၃% ငှဖွေူကို တဈသကျလုံး လှညျ့သုံးပါပဲ..။ဆိုတော့ ၃၂ သိနျး သကျသာပွီး ၁၀ သိနျး ပိုပေးရရငျတောငျ သိနျး ၂၀ ကြျော ကားဈေးလြော့သှားပါပွီ… ဒါတောငျ ကညန ခှနျ က အဖွူအမဲ မသဲကှဲသေးလို့ပါ…ကွားနတေဲ့ သတငျးတှအေရ ကညနခှနျသာ တဈဝကျလြော့သှားရငျ သိနျး ၅၀ လောကျ လြော့ဖို့ရှိနပေါတယျ..လြှော့လညျး လြှော့သငျ့ပါတယျ…။
အဲဒါဆို သိနျး ၃၀၀ နဲ့ ၄၀၀ ကွား ကားသဈတှကေ သိနျး ၇၀ လောကျ သကျသာသှားနိုငျပါတယျ… (ကညနခှနျသာ တဈဝကျလြှော့ခဲ့ရငျပေါ့)သိနျး ၈၀၀(CIF 40000) ကြျောကားမြိုးဆိုရငျ သိနျး ၁၅၀ ဝနျးကငျြ သကျသာသှားနိုငျပါတယျ..၁၁ ယောကျစီး(လုပျငနျးသုံး)ကားတှဖွေဈတဲ့ Kia Carnival တို့၊ Toyota Majesty တို့ကတော့ နဂိုထဲက အခှနျလြှော့ပွီးသားဆိုတော့ သိပျမသကျသာသှားဘူးပေါ့..ကြှနျတျောလညျး နားလညျသလောကျကို အတိုခြုံးပွီးရှငျးရတာပါ၊ ဒါတောငျ ရှညျသှားတယျ.. လိုအပျတာတှေ ၊ ဖွညျ့ဆှတျထောကျပွခငျြတာတှေ ကိုလညျး အားမနာတမျးပွောနို ငျပါတယျ..။
Aung Moe Lwin (UnitedExplorer)6Aug 2020
ကားတစ်စီး သွင်းရင် အခွန် ၅ မျိုးဆောင်ရ ပါ တယ်..။
၁။ အကောက်ခွန် Custom Duty
၂။ အထူးကုန်စည်ခွန် (SGT)
၃။ ကုန်သွယ်ခွန် (CT)
၄။ ဝင်ငွေခွန်(*Unruled Income tax)
၅။ ကညနခွန် ဆိုပြီး ရှိ ပါတယ်.
အခွန် အပြောင်းအလဲတွေကြား မှာ ကားဈေး ဘယ်လောက်ထိ ကျသွားမလဲအခု Custom Duty လျှော့ပေး တာ အတည်ဖြစ် ပါပြီ၊ (ရုံးတွင်းညွှန်ကြားစာလည်း ထွက်ပါပြီ) ( CD လျှော့လိုက်တာ နဲ့ အခွန်တွက်ချက်မှုအရ အခွန် ၁၊ ၂၊ ၃ မှာပါ လိုက်လျော့ ပါတယ် )စည်းကျပ်မှု မှလွတ်ကင်းသော ဝင်ငွေခွန်ကိုတော့ ၃% ကနေ ၆% တက်ဖို့ များနေပါပြီ။ အစိုးရက ၃၀% တင်ပြတာကို လွှတ်တော်ဥပဒေကြမ်းကော်မတီက ၆% နဲ့ပြန်ပြင်ထားပါတယ်။ မဲခွဲပြီးရင် အတည်ဖြစ်ပါမယ်…ဟိုတုန်းကတော့ Unruled Income tax တွေကို ကောက်တာ ၁၅% ပါ။ ဘာကြောင့် ၁၅% ကောက်လဲဆိုတော့ စည်းကြပ်ခံထားရသူတွေက ၁၀% အနည်းဆုံးဆောင်ထားရ လို့ပါ…။
ကညနခွန် ကလည်း တစ်ဝက်လောက်လျှော့မယ် လို့ အသံထွက်နေ ပါတယ်( အတည်မဖြစ်မသေးပါ )တော်တော်များများက ကားဝယ်ရင် ဆောင်ရတဲ့ ဝင်ငွေခွန်ကို မဖြစ်မနေပေးရမယ့်ငွေလို့ပဲ ထင်နေတယ်.. အမှန်က စည်းကြပ်ခံပြီးတဲ့ငွေဖြူရှိသူက အဲ့ဒီငွေဖြူနဲ့ ဝယ်ရင် မပေးရပါဘူး.. စည်းကြပ်မခံရသေးသူသာပေးရတာပါ…ဝင်ငွေတွေကနေ (ကား၊ အိမ်ခြံမြေ) ဝယ်တဲ့အခါRuled Income tax – စည်းကျပ်ပြီးသောဝင်ငွေ (ငွေဖြူ) သူတို့ကတော့ ဝ-၂၅%အထိ အခွန် ဆောင်ထားရပါတယ်. အဲဒါကြောင့် အဲဒီငွေတွေ ပြနိုင်ရင် အခွန် ထပ်မပေးရပါဘူး။
Unruled Income tax – စည်းကျပ်မခံရသေးသောငွေ (ငွေနို့နှစ်) အခွန်မဆောင်ရသေး (ခုတော့ ၆%ကနေ စဆောင်ရနိုင်ပါတယ်)Black Money – စည်းကျပ်မခံဝံ့သောငွေ (ငွေမဲ) သမာအာဇီဝမဟုတ်သောအလုပ်များမှရသောငွေနံပါတ် ၄ ဝင်ငွေခွန်နှုန်း ထား အပြောင်းအလဲ ဟာ ငွေဖြူ သမားတွေ ကို မသက်ရောက် ပါဘူးငွေဖြူသမား က ၁၀% ကနေ ၂၅% ဆောင်မှ ရတဲ့ ငွေဖြူ ကို ငွေနို့နှစ်သမား နဲ့ ငွေမဲသမားတွေက ၆%ကနေ စပြီးပဲ ဆောင်ရမယ်ဆိုတော့ တရားသလား၊ မတရားသလား စဉ်းစားကြည့်ကြေ ပါ့.. ( ခုတော့ ကိုဗစ်ကာလ ငွေကြေးစီးဆင်းမှုကလည်းလိုနေတော့ ကာလအပိုင်းအခြားတစ်ခုအနေနဲ့လုပ်ရမှာပါပဲ ။
အခွန် အပြောင်းအလဲတွေကြား မှာ ကားဈေး ဘယ်လောက်ထိ ကျသွားမလဲဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ ကားဈေးက
၁။ အခု ၈ လပိုင်း ၁ ရက်နေ့က စပြီး ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်း ကို ရောက်လာတဲ့ ကားတွေ ကို အကောက်ခွန်နှုန်းထားတွေ လျှော့လိုက်ပါတယ်..ဘယ်လိုလျှော့တာလဲဆိုတော့ CBU ကားတွေကို အင်ဂျင်ပါဝါ 2.0 အောက်ကို အရင် ၃၀% ကနေ ၂၀% လျှော့ကောက်လိုက်တယ်၊ 2.0 အထက်ဆိုရင် အရင် ၄၀% ကောက်တာကနေ ၃၀% ဖြစ်သွားတယ်။SKD အရင် ၁၀% ကနေ ဝ% လျှော့ကောက်လိုက်တယ်၊ 2.0 အထက်ဆိုရင် အရင် ၂၀% ကောက်တာကနေ ၅% ဖြစ်သွားတယ်။လာမယ့် အောက်တိုဘာ ၁ ရက် နေ့မှာတော့ စည်းကျပ်မှုမှလွတ်ကင်းသောငွေကို ၃% တစ်နှစ်လျှော့ပေးထားတာကနေ နောက်တစ်နှစ်ကို ၆% ပြောင်းဖို့ရှိနေပါတယ်..အခုဆိပ်ကမ်းက မထုတ်ရသေးတဲ့ ကားတွေအတွက် အဆင်ပြေသွားပြီး၊ ဆိပ်ကမ်းထုတ်ပြီးသား ကားတွေကတော့ မပါဘူးပေါ့..။
ကားတစ်စီးသွင်းရင် ဆောင်ရတဲ့ အခွန် ၅ မျိုး
အကြမ်းဖျဉ်း ဘယ်လောက် လျှော့သွားမလဲဆိုတော့ အင်ဂျင်ပါဝါ ၂၀၀၀ အောက် (CIFဈေး (သို့) AV) ဒေါ်လာ ၂၀၀၀၀ တန်ကားကို တွက်ကြည့်ရင်အရင် ၂၀၀၀၀ x ၃၀% = ဒေါ်လာ ၆၀၀၀ ကနေ အခု ၂၀၀၀၀ x ၂၀%= ဒေါ်လာ၄၀၀၀ ဖြစ်သွားတော့ ဒေါ်လာ ၂၀၀၀ (၂၈ သိန်း သက်သာသွားမယ်)နောက်အထူးကုန်စည်ခွန် နည်းနည်းလျော့ပါမယ် … တွက်နည်းအရ (၂၀၀၀၀ + ၄၀၀၀)x၁၀% = ၂၄၀၀ $ ဖြစ်သွားပါမယ်၊ နဂိုနှုန်းဆိုရင် ၂၆၀၀ ဆိုတော့ ဒေါ်လာ ၂၀၀ သက်သာပါမယ်..။
Commercial Tax နည်းနည်းလျော့ပါမယ် တွက်နည်းအရ (AV + CD + SGD ) x 5% ဆိုတော့ နဂိုထက် $110 သက်သာသွားပါမယ်..ဆိုတော့ အခွန် ၃မျိုးအတွက် သိန်း ၃၀၀ ဝန်းကျင်ကားတွေမှာ 32သိန်း ဝန်းကျင်လျော့သွားပါပြီ..ဒါပေမယ့် (Unruled Income Tax သာ ၃% ကနေ ၆% တက်သွားရင်) ၂၃ သိန်း ဆောင်ရမှာဖြစ်လို့ နဂိုထက် ၁၀ သိန်း ပိုဆောင်ရပါမယ်.. (ငွေဖြူရှိပြီးသားလူကတော့ မပေးရဘူးပေါ့…)။
အခွန် အပြောင်းအလဲတွေကြား မှာ ကားဈေး ဘယ်လောက်ထိ ကျသွားမလဲအမှန်က ၃% နဲ့ ပေးတုန်းမှာ ဆောင်ထားတဲ့သူတွေက အဲဒီ ၃% ငွေဖြူကို တစ်သက်လုံး လှည့်သုံးပါပဲ..။ဆိုတော့ ၃၂ သိန်း သက်သာပြီး ၁၀ သိန်း ပိုပေးရရင်တောင် သိန်း ၂၀ ကျော် ကားဈေးလျော့သွားပါပြီ… ဒါတောင် ကညန ခွန် က အဖြူအမဲ မသဲကွဲသေးလို့ပါ…ကြားနေတဲ့ သတင်းတွေအရ ကညနခွန်သာ တစ်ဝက်လျော့သွားရင် သိန်း ၅၀ လောက် လျော့ဖို့ရှိနေပါတယ်..လျှော့လည်း လျှော့သင့်ပါတယ်…။
အဲဒါဆို သိန်း ၃၀၀ နဲ့ ၄၀၀ ကြား ကားသစ်တွေက သိန်း ၇၀ လောက် သက်သာသွားနိုင်ပါတယ်… (ကညနခွန်သာ တစ်ဝက်လျှော့ခဲ့ရင်ပေါ့)သိန်း ၈၀၀(CIF 40000) ကျော်ကားမျိုးဆိုရင် သိန်း ၁၅၀ ဝန်းကျင် သက်သာသွားနိုင်ပါတယ်..၁၁ ယောက်စီး(လုပ်ငန်းသုံး)ကားတွေဖြစ်တဲ့ Kia Carnival တို့၊ Toyota Majesty တို့ကတော့ နဂိုထဲက အခွန်လျှော့ပြီးသားဆိုတော့ သိပ်မသက်သာသွားဘူးပေါ့..ကျွန်တော်လည်း နားလည်သလောက်ကို အတိုချုံးပြီးရှင်းရတာပါ၊ ဒါတောင် ရှည်သွားတယ်.. လိုအပ်တာတွေ ၊ ဖြည့်ဆွတ်ထောက်ပြချင်တာတွေ ကိုလည်း အားမနာတမ်းပြောနို င်ပါတယ်..။
အမေ..သား ဒီဟငျးမစားခငျြဘူးလို့. ငွငျးခှငျ့မရှိသော ဘဝတှေ..(ရုပျသံ)
ဦးကြျောဟိနျး ဆုံးပါးသှားလို့ ဝမျးနညျးစှာ ငိုကွှေးနတေဲ့ ဖှဖှေေး(ရုပျသံ)